Mukurukuri Sperso inouya kubva kumazwi maviri eSperm uye Sound. Chimiro chaicho chebhuru regirazi uye mutauri mugomba rake pamusoro unoreva pfungwa yemurume uye kupenya kwakadzika kwenzwi kwakakomberedza kunge moto wechirume mukati mechikadzi mumukati memukati mechikadzi. Icho chinangwa ndechekugadzira yakakwirira simba uye yakakwirira mhando kurira kwakatipoteredza. Iyo isina waya system inoita kuti mushandisi abatanidze nharembozha yavo, laptop, mapiritsi uye zvimwe zvinoshandiswa kumutauri kuburikidza neBluetooth. Uyu mutauri wedenga anogona kuve wakashandiswa zvakanyanya mumba yekutandarira, makamuri yekurara uye mukamuri yeTV.
Chipiri 2 Kukadzi 2021
Chigaro Iyo Ane stool ine matanda akasimba matanda emapuranga anoita kunge anoyangarara zvakanaka, asi yakazvimirira kubva pamatanda makumbo, pamusoro peiyo simbi. Nyanzvi yekugadzira inotaura kuti chigaro, chakagadzirwa nemaoko akasimbiswa eco-hushamwari matanda, anoumbwa kuburikidza nekushandiswa kwakasiyana-siyana kwezvimedu zvechimiro chimwe chehuni chakaiswa uye chakatemwa nenzira ine simba. Kana yakagara pachigaro, iko kusimuka zvishoma pakona kusvika kumashure uye kutenderera kubva kumakona mumativi kunopedzwa nenzira inopa nzvimbo yakasikwa, yakagadzikana yekugara. Iyo Ane stool inongova neiyo dhigirii yakakodzera yekunetseka kuti ugadzire yakanakisa kupedzisa.
Muvhuro 1 Kukadzi 2021
Svondo 31 Ndira 2021
Mugovera 30 Ndira 2021
Tafura Yekofi Dhizaini iyi yakafuridzirwa nemifananidzo yejometri yeGolide Ratio neMangiarotti. Fomu iri rinotarisana, ichipa mushandisi nzira dzakasiyana. Dhizaini yacho ine matafura mana ekofi ehukuru hwakasiyana uye pouf yakaomeswa yakakomberedza fomu yemuti, inova chinhu chekuvhenekesa. Izvo zvinhu zvekugadzira zvacho zvinoverengeka kuita zvido zvemushandisi. Iyo yakagadzirwa inogadzirwa neCorian zvinhu uye plywood.
Chishanu 29 Ndira 2021
Chigaro Ydin stool inogona kuiswa iwe pachako, pasina kushandisa zvakakosha maturusi, nekuda kweiyo nyore nzira yekubatanidza. Iwo makumbo mana akaenzana akaiswa mune zvisina kunyorwa kurongeka uye chigaro chekongiri, chinoita sebwe rekiyi, chengetedza zvese munzvimbo. Tsoka dzinogadzirwa nehuni dzekupaza dzinouya kubva kune anogadzira masitepisi, nyore nyore kugadzirwa uchishandisa tsika dzechinyakare dzekugadzira matanda uye pakupedzisira oiri. Iyo chigaro inongori yakaumbwa mune isingagumi fiber-yakasimbiswa UHP Concrete. Zvikamu zvishanu chete zvisina dissociable kuti zvive zvakapetwa zvakarongedzwa uye zvakagadzirira kutumirwa kune vatengi vekupedzisira, imwezve gakava yekuenderera mberi.
calendar 2013 “Safari” Kalendari Chishanu 5 Kurume
good morning original calendar 2012 “Farm” Kalendari China 4 Kurume
inci Ceramic Chitatu 3 Kurume
Mukurukuri Chigaro Seti Yekofi Fanicha Pamwe Fan Fan Tafura Yekofi Chigaro